Kukanganisa kwakakomba kunoonekwa muUbuntu | Linux Vakapindwa muropa
Kunetseka kwakanyanya kunoonekwa muUbuntu
Nhasi vaonekwa huwandu hwekuremerwa kwakakomba muUbuntu inoshanda sisitimu, gomba rekuchengetedza iro rinobvumira kodhi nemvumo yemutungamiri kuitiswa muhurongwa hwekushandisa, chimwe chinhu chinogona kukonzera mushandisi asingadiwe kuti aite kodhi yakaipa pane komputa yako.
Iko kushushikana kwakaonekwa ne Donncha O'Cearbhaill, nyanzvi yekuchengetedzwa kweIrish uyo akatoita vhidhiyo nezve iyo njodzi, iyo iwe yaunogona kuona kumusoro kweiyi vhidhiyo.
Izvi chaizvo inoitwa nekunetseka kweiyo Apport chirongwa, chirongwa chinozivisa zvikanganiso muUbuntu. Chirongwa ichi chinogadzira iyo faira ine yekuwedzera .crash, iyo inogona kushandiswa kumhanyisa Python kodhi nemidzi rombo nekushandisa kumwe kushushikana muchirongwa chePolisiKit, nezvose izvi zvinosanganisira.
Ichi Inoitika nekuti iyo Apport chirongwa haina kushambidza iyo .crash mafaera uye yakavasiya ipapo, chimwe chinhu chaibvumidza chero murwisi kuti aite kodhi neropafadzo dzemutungamiri.
Iri idambudziko rakakura kune vanhu vane Ubuntu anoshanda masystem, kubvira kunetseka uku kuripo kubva kuUbuntu 12.10 zvichienda mberi. Mukuwedzera, kukundikana kwakataurwa mune mamwe maUbuntu-anoshanda masisitimu anoshanda, senge rakakurumbira Linux Mint.
Fungidzira dambudziko iri rinounza yeUbuntu server inoshanda sisitimu, iyo inogona kubata zvakavanzika ruzivo rwemakambani makuru. Fungidzira kuti mumwe munhu anosvika opinda mumaseva aya aine midzi yerombo, kuteedzera zvakavanzika mafaera emapurojekiti ekambani obva azvitengesa kune wepamusoro bhidhaiti, chingave chinyadzo.
Ehe, kubva kuCanonical senguva dzose ivo vanga vachimhanya kwazvo uye vatove nemachira ekushomeka. Neichi chikonzero, kana iwe uine Ubuntu inoshanda sisitimu kana yakavakirwa pairi, zvinokurumidza kugadzirisa pamwe neyakajairwa mirairo (apt-tora yekuvandudza uye apt-tora kusimudzira) kuti ugone kuve wakachengeteka zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kunetseka kwakanyanya kunoonekwa muUbuntu
Zvakafanana kumakambani ari nani debian pane ubuntu.
KDE inozivisa SystemdGenie, systemd graphical manejimendi application
5 mashoma-anozivikanwa mabhurawuza ayo anokushamisa iwe